Sida laga soo xigtay falanqeeyayaasha qaar Apple ma gaari doonto tirada 3 bilyan ee sanadkan | Waxaan ka socdaa mac
Sannadkii hore Apple waxay gaadhay tirada aan caadiga ahayn ee laba tiriliyan shirkad. Dhammaan saadaashu waxay muujinayaan in shirkaddu ay sii wadi doonto koritaanka iyada oo ay shaki ku jirin inay gaari doonto 3 bilyan. Su’aashu waxay tahay goorma ayey tan dhici doontaa. Falanqeeyayaasha qaar ayaa saadaaliyay inay noqon doonto 2021, laakiin warbixin cusub ayaa xaqiijinaysa inaysan jiri doonin ilaa sanadka soo socda, taas oo ah, ilaa 2022.
Falanqeeyayaasha dhaqaalaha ayaa saadaalinaya in Apple ay gaari doonto qiime shirkadeed oo ah seddex tiriliyan. Shaki kuma jiro fannaankan, laakiin waxaa jira go'aaminta goorta ay gaarayaan iyaga. Qaarkood waxay yiraahdaan waxay noqon doontaa sanadkan 2021. Hase yeeshe, Daniel Ives oo ka tirsan Wedbush Securities, wuxuu xaqiijinayaa inaysan jiri doonin illaa 2022 marka tiradaas weyn la gaari doono.
Ives wuxuu qabaa in iPhone uu mas'uul ka noqon doono lambarradan cajiibka ah. Isbedelka kor u kacay badanaa waxaa u sabab ah saadaasha iibka oo kordhay taleefannada casriga ah ee shirkadda.
«Maanan arag kor u kac ku yimi bilowga hawsha sidan oo kale dhowr sano gudahood Apple iyo rikoorka kaliya ee iPhone la mid ah wuxuu noqon lahaa iPhone 6 sanadka 2014 oo ku saleysan falanqeynteena »
Falanqeeyaha ayaa aaminsan in Apple ay awood u leedahay rar in ka badan 240 milyan oo cutub 2021, iyadoo ay macquul tahay inay gaarto ilaa 250 milyan oo unug. Taasi way ka sarreysaa saadaasha hadda jirta ee Wall Street oo ah 218 milyan oo unug.
Falanqeeyayaasha qaar ayaa ka soo horjeeda oo xaqiijinaya inay noqon doonto 2021 marka tirada cajiibka ah ee illaa iyo hadda aysan jirin shirkad ay gaarto la gaaro. Gaar ahaan haddii xanta la fuliyay oo Apple ay xaqiijineyso jiritaanka soo saarista gaariga Apple.
Waxaa laga yaabaa inay gaarto shaxanka oo aan ahayn iibinta qalabkeeda, taas oo waddada kaliya aysan ahayn iPhone, Mac-yada leh M1 wax badan ayaa laga dhihi doonaa, hadaanay ahayn saamiyada suuqa saamiyada mahadsanid rajada laga qabo gaarigaas gebi ahaanba korontada ka soo bixi kara shirkadda Mareykanka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Apple » Noticias » Sida laga soo xigtay qaar ka mid ah falanqeeyayaasha Apple ma gaari doono tirada 3 bilyan sanadkan